မွေးနေ့ အမှတ်တရ (၀၁ ဒီဇင်ဘာ)
အမေ့ကို စတွေ့ခါစမှာ အမေ့ မျက်နှာထားက တည်တည်တင်းတင်း၊ မာနကြီးသူရယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ကိုရေချမ်းတို့ အဖေ့ဘက်က အဖိုးဆုံးလို့ သူတို့အိမ်မယ် ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တာကို တရုံးလုံးဖိတ်ကျွေးတာမှာ အမေနဲ့ စတွေ့ဖူးခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတုန်းက မရွှေစုကလည်း ကိုရေချမ်းကို ကြိုက်ဖို့နေနေသာသာ စိတ်ကူးထဲတောင် မရှိခဲ့သေးတော့ သူ့အမေ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ရှိမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ မလေ့လာ မဆန်းစစ်မိခဲ့ဘူး။ တခဏ အကြည့်နဲ့ မာနကြီးသူဖြစ်လိမ့်မယ်ရယ်လို့ပဲ အကဲခတ်မိခဲ့တယ်။
ကိုရေချမ်းနဲ့ မရွှေစုတို့ စပြီး တွဲနေကြတော့ အမေက ရန်ကုန်က သူ့ဦးလေး နေမကောင်းတာကို သွားပြုစုနေရလို့ မန္တလေးမှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မန္တလေးမှာ နေတုန်း မရွှေစုတို့ အတွဲ သွားရင်းလာရင်း ကိုရေချမ်းရဲ့ အဖေရယ် အဖိုးရယ် (အမေ့ရဲ့ အဖေ) နဲ့ သွားရင်းလာရင်း လမ်းမှာ မတော်တဆ ဆုံကြတဲ့အခါ အဖေက မသိချင်ယောင်ဆောင်၊ အဖိုးက တပြုံးပြုံး လက်တွေပြနဲ့ပဲ ပြီးသွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ မရွှေစုလည်း မန္တလေးကနေ စင်ကာပူကို ရောက်လာခဲ့တယ်။
ကိုရေချမ်းနဲ့မရွှေစုတို့ မေတ္တာမျှ ပြီး ၄နှစ်အကြာ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင် ၁၀လအလို မရွှေစု မြန်မာပြည်ကို သီလရင် ဝတ်ဖို့ ပြန်တော့ အဖေနဲ့ အမေက ကိုရေချမ်းရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ သူတို့ ချွေးမလောင်းကိုတွေ့ရအောင် မန္တလေးကနေ ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုရေချမ်းက အလုပ်က ခွင့်မရတဲ့အတွက် စင်ကာပူမှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အမေနဲ့ စပြီး တွေ့ရတော့တာပဲ။ သေချာ မသိရသေးတဲ့ ယောက္ခမကို မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ မာနကြီးတယ်လို့ တချိန်လုံး ယူဆပြီး အနည်းငယ်လန့်နေမိခဲ့တဲ့ မရွှေစု ဟာ အမေနဲ့ တကယ်တန်း နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှ ကိုယ့်အထင်နဲ့ အမြင်ဟာ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားမှန်း သိရပါတော့တယ်။
အမေဟာ မရွှေစုကို တွေ့တွေ့ချင်း သမီးလို့ တရင်းတနှီး ခေါ်ပြီး ဖက်နမ်းတော့တာပဲ။ နမ်းတာကတော့ အင်မတန် ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ သူနမ်းပြီး သူ့ကို ပြန်နမ်းမှလည်း ကြိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက မရွှေစုမှာတော့ အမေ ဖက်ထားတာ ရုန်းရမလိုလို၊ ဘာလိုလို ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ၊ ဒီကြားထဲ အိမ်ကလူတွေ ကြည့်နေကြသလားလို့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ မလုံမလဲဖြစ်ရသေးတယ်။ ခုမှ တွေ့တဲ့ သမီး ယောက္ခမ ပိုလွန်းလှပါကလားလို့ သူများတကာ ကဲ့ရဲ့မှာ ပြောင်လှောင်ကြမှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ်။ မရွှေစုတို့အိမ်က သူတွေက ဒါမျိုးဆို အင်မတန် စချင် နောက်ချင် တတ်ကြတယ်။ အမေက တွေ့တွေ့ခြင်း သမီးစုလို့ ခေါ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ မေမေလို့ သုံးပေမယ့် မရွှေစုက နှုတ်မရဲလို့ အန်တီလို့ပဲ ပြန်ခေါ်မိခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူ့သားကို ပြန်တိုင်လို့ မနည်းကြိုးစား မျက်စိမှိတ်ပြီး မေမေလို့ အရဲစွန့် ခေါ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ မရွှေစုတို့အိမ်က သူတွေက အမယ်... သူက အမေ၂ယောက်နဲ့ဟ ... လို့ ၀ိုင်းစကြပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မေမေ - မေမေ ချင်း ဘယ်သူ့ခေါ်မှန်း မသိမှာစိုးလို့ မန်းမေမေ နဲ့ ရန်ကုန်မေမေ လို့ ၂ယောက် ရှေ့မှာ ခွဲခြား ခေါ်ရပါတယ်။ မရွှေစု ရဲ့ ရန်ကုန်မေမေ ကတော့ သူ့နာမည် အသစ်ရတဲ့ အတွက် မရွှေစုကို ချစ်မျက်စောင်းထိုးပါတယ်။
မန်းမေမေဟာ တကယ်တော့ မရွှေစုထင်သလို မာနမကြီးပါဘူး။ သူ့သားကြီးကို အရမ်းချစ်တဲ့ အတွက် သူ့သားကြီး ချစ်တဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လိုက်ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ် အမြဲရှိပါတယ်။ သူ့ချွေးမဖြစ်မယ့် မရွှေစု တော်မှ လိမ်မာမှ ချစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ချွေးမ ဖြစ်မယ့်သူဟာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လာလာ၊ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချစ်ကိုချစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမယ် သတ်မှတ်ပြီးသား သူမျိုးဆိုတော့ လွန်စွာ မိန်းမ မပီသတဲ့ မရှပ်တေး မပြာယာ စွာတေးလန် အမည်ခံ မရွှေစုအဖို့ ယောက္ခမရ အင်မတန် ကံကောင်းသွားတယ်လို့ ဆိုရပါပေမယ်။ ဟီး... တော်ပါသေးရဲ့နော်...။
ပြီးတော့ မန်းမေမေက အရမ်းလည်း ရိုးသားပါတယ်။ သူများ ပြောတာလည်း ယုံလွယ်ပါတယ်။ ကြောက်လည်း ကြောက်တတ်ပါတယ်။ လှလည်း လှချင်ပါတယ်။ လှလည်း လှပါတယ်။ ရှေးခတ်မင်းသမီးတွေထက်ကို ပိုလှပါတယ်။ ကိုရေချမ်းက သူ့အမေနဲ့တူလို့ ချောပါတယ်။ (စကားချပ်။) မရွှေစုက သူ့အတွက် နှုတ်ခမ်းနီ ရောင်စုံ ဝယ်ပေးထား၊ ပုဝါရောင်စုံ ဝယ်ပေးထားတာကို အဝတ်အစား အရောင်နဲ့ လိုက်အောင် အမြဲ ဆင်မြန်းချယ်သ ဖက်ရှင်ကျအောင်နေတတ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ မိတ်ကပ် လိမ်းခဲတဲ့ တခါတရံ ကြောင်ချေးရုပ်ပေါက်နေတဲ့ သူ့ချွေးမ မရွှေစုကို အင်မတန် အလှပြင်စေချင်၊ သူ့လိုပဲ လှလှပပ ကြွကြွရွရွလေး နေစေချင်ပါတယ်။
မန်းသူတို့ ထုံးစံ အရမ်းလည်း ရက်ရောပါတယ်။ လက်ဖွာပါတယ်။ လက်ထဲရှိသမျှ အကုန်သုံးပစ်တတ်ပါတယ်။ သူတပါးကို ကျွေးရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်မစားပဲ အငတ်ခံပြီး ကျွေးပါတယ်။ မန်းသူ မန်းသားတွေ ထုံးစံ မန္တလေးသည်သာ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမြို့တော်၊ မန္တလေးက အစားအစာသည်သာ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆ၊ မန္တလေးက အရာမှန်သမျှ ဘာနှင့်မျှ မယှဉ်နိုင်လို့ ခံယူထားသူ မန်းသူ စင်စစ် ဧကန်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးမက မန်းသူ ဖြစ်ရမယ်လို့ စည်းမျဉ်းချမထားတာ ဘုရားတရား မ လို့ လို့ ပြောရပါမယ်...။ ဟူး.....။
တစ်နှစ်တုန်းက ရန်ကုန်ပြန်တော့ ကိုရေချမ်း ပဉ္ဇင်းဝတ် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ မှာ တရားစခန်းဝင်တဲ့အခါ မရွှေစုက မန်းဖေဖေနဲ့ မန်းမေမေကိုပါ ချမ်းမြေ့မှာ သားနဲ့အတူ တခါတည်း တရားလိုက်ထိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တာ သူတို့လည်း တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ မရွှေစုတို့ အိမ်သားတွေ မောင်နှမတတွေ သူငယ်ချင်းတွေက မရွှေစုကို ပြောင်ကြ လှောင်ကြတယ်။ မရွှေစုတို့ ယောက္ခမကို ပေါင်းတတ်လိုက်ပုံများ ဟိုသီချင်းထဲကလိုပဲတဲ့။
" ယောက္ခမဆိုတာ တည့်အောင်ပေါင်း ကျောင်းကိုထုတ်....
ဥပုသ် ရည်ရှည် စောင့်ခိုင်းမှာ.... "
ဒီကနေ့ကတော့ မန်းမေမေရဲ့ ၆၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်းမြို့သူဇာမေမေ သက်တော်ရာကျော်ရှည် ကျန်းမာ ချမ်းသာစေ...။ တရားဓမ္မများ အားထုတ်၍ ငြိမ်းချမ်းစေ....။
အဝေးတနေရာမှ သမီးစု နှင့် သားကြီးရေချမ်း
Posted by စုချစ် at 12/01/2014 11:27:00 AM6comments:
See you at the Roof !!! ( ခေါင်မိုးပေါ်ကလူကြီး မွေးနေ့ အမှတ်တရ…)
မနက်ခင်း ဦးရေချမ်း လမ်းလျှောက်မှ ပြန်လာချိန်....
" ဘုရားပန်းတွေ ဝယ်လာတာကောင်းလဲမကောင်းဘူး၊ မမြင်ဘူးလားဟယ်… ဒီမယ် အပွင့်တွေနွမ်းနေ ကြွေနေတာ…"
" မြင်သား… ပန်းသည်က အလှဆုံးကို ရွေးပေးထားတယ်ပြောတော့ အားနာတာနဲ့ပဲ သူပေးတဲ့အတိုင်းယူလာတာ…"
" နောက်တစ်ခါဆို အဲ့ပန်းသည်ကို ပြောဦးမှပဲ…"
" ကျနော်မပါတဲ့ အခေါက်ကျမှ ပြောနော်… ကျနော့်ရှေ့ မပြောနဲ့…"
" ငြုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကလည်း နည်းနည်းပဲဝယ်ပါဆို ဘာလို့အများကြီး ဝယ်လာတာလဲ… ပျဉ်းတော်သိမ်ရောပါမလာဘူးလား…"
ဦးရေချမ်း ဘာမှမပြော၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေသည်။ ပျဉ်းတော်သိမ်က အလကားယူရသည့်အတွက် ယူရမှာရှက်လို့ တမင် ယူမလာတာပဲဖြစ်မည်။
At Starbucks ….
"ကျနော်… ကော်ဖီ သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်…"
" နေဦး… ဒီမှာ ဟိုတစ်နေ့က စတားဘတ်ခ်ကပေးလိုက်တဲ့ ကူပွန်လေးရှိတယ်… ရော့ ဒါလေး နဲ့ သွားဝယ်လေ…"
" ဟာ… အဲ့ဒါဆို အလကားတောင်းသလိုကြီး ဖြစ်နေမှာပေါ့…. ရှက်စရာကြီး… မရွှေစု သွားဝယ်ပေးမလား…"
At Shopping center ….
"ဟင်… မုန့်သွားဝယ်တယ်ဆို … မုန့်ထုတ်တွေရော…"
" ဟိုက်… ပိုက်ဆံပေးပြီး အထုတ်မယူပဲ ထွက်လာမိတာ... ကောင်တာမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ…"
" ခဏလေးပဲ ရှိသေးတာ… ပြန်သွားယူလိုက်လေ…"
" ဟဲ… ဟိုလေ… ပေးပေး… လက်ထဲကအထုတ်တွေ ကျနော် အကုန်ကိုင်ပေးထားပြီး ဒီကစောင့်နေမယ်… ရော့ဒီမှာ ဘောင်ချာ… မရွှေစု သွားယူပေးနော်… "
"အာ… ကိုယ်ဝယ်ပြီးကျန်ခဲ့တာ ကိုယ့်ဘာသာ သွားယူပါလား…"
" ဘာလဲ… မပြောရဲဘူးလား… တယ်…လူကြောက်တာပဲ…"
"အိမ်က ကလေး အိမ်ထဲမယ် ဆေးလိပ်သောက်လို့ အနံ့တွေ နံတာ၊ ညမိုးချုပ်ကြီး ဧည့်သည်တွေခေါ်တာ သတိပေးမယ်ဆို သူ ကျောင်းမသွားခင် ပြောလိုက်ဦးလေ…"
" အေးပါ... ခုမှ အိပ်ရာထ မနက်အစောကြီးဆိုတော့ ခဏ နေပါဦး…"
" ကိုယ်လည်း သူ့ကို နေ့လည်စာ ကောင်းကောင်းချက်ကျွေးတာပဲ... ပြောရမဲ့ကိစ္စ ပြောလိုက်လေ…"
" အေးပါ... ခုမှ နေ့လည်စာ စားပြီးတာ... ခဏ နေပါဦး…"
" သူ စာကျက်နေတယ်... ည မအိပ်ခင် ပြောလိုက်လေ…"
" အေးပါ... စာကျက်နေတော့ အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေပါဦးမယ်... ခဏ နေပါဦး…"
" နေတော့... ကိုယ်ဘာသာပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်... တကတည်း... "
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ ဦးမောင်နဲ့ ဒေါ်မိဆိုတဲ့လင်မယား၂ယောက်ဆိုတာ ရှိကြသတဲ့။ ဦးမောင်က အရမ်းရှက်တတ် ကြောက်တတ် အားနာတတ်တာတဲ့။ ဒါပေမယ့်လို့ သူ့ကို ရှက်တတ် ကြောက်တတ်တယ်လို့ ပြောခံရမှာကိုလည်း မကြိုက်ဘူးတဲ့။
တနေ့တော့ သူတို့အိမ်ခေါင်မိုး မိုးယိုနေလို့ အမိုးပြင်ဖို့ လုပ်ရတယ်တဲ့။ ရှေးက တောရွာတွေမှာဆို အိမ်တိုင်းကိုယ်စီ တူ၊ လွှ၊ ဆောက် စတဲ့ လက်သမားပစ္စည်းတွေ စုံအောင်မရှိ၊ ရှိတဲ့သူအချင်းချင်း မျှတပြီးသုံးလေ့ရှိကြတယ်တဲ့။ အမိုး ပြင်မဲ့ ဦးမောင်ဟာ သံတွေ ခါးပိုက်ဆောင်ထဲထည့်၊ နှီးတွေကိုခါးမှာပတ်၊ သက်ကယ်ဗျတ်တွေပိုက်ပြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို တက်သွားရောတဲ့။ ခေါင်မိုးပေါ် ရောက်တော့မှ ထုတ်တန်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့...
“ အေ... မယ်မိရေ... ဘိုးသောင်တို့ အိမ်က တူလေး သွားငှားလိုက်စမ်းဟေ့...”
“ မောင်ခွေးတို့အိမ်က ဆောက်ကလေး ခဏလို့ပြောပြီး ယူပေးစမ်း...”
“ အရီးမြတို့ အိမ်က လွှကလေး သွားဆွဲလိုက်ပါအုံး... “ စသဖြင့် ဒေါ်မိကို တခုပြီး တခု ခိုင်းပါရောတဲ့။
ပြီးတော့ သူက ပြောသေးတာတဲ့။
" ခေါင်မိုးပေါ်ရောက်နေလို့ မသွားအားလို့ပါကွာ... နို့မို့ ငါ သွားပေးပါတယ်ကွာ.. " တဲ့။
ဒေါ်မိလည်း ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း ကလေးထိန်းရင်း ဟိုပြေး ဒီပြေးနဲ့ ပစ္စည်းတွေ လိုက်ငှားရတာ ကြာတော့ စိတ်ကတိုလာတာပေါ့။
“ ဘယ့်နှယ်တော်... ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်မိုးပေါ် မတက်ခင် အကုန်စုံအောင် ယူသွားပါလား။ ခုမှ ဟိုခိုင်း ဒီခိုင်းနဲ့...”
အဲသလို ပြောတော့လည်း ဦးမောင်က အလျှော့မပေးဘူး ဆရာ။
“ ဒါလေးတောင် မလုပ်ပေးချင်ဘူး။ ဒီမိန်းမ … တယ်... လူကြောက်တာပဲ... “ လို့ ပြန်ပြောသေးတာတဲ့။
အဲ့ဒီပုံပြင်လေးဟာ မရွှေစုတို့ အဖွား ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်လေးရယ်ပါ။ မရွှေစုတို့ (အဖိုး) အဖေကြီး က တခုခု သူများကို ပြောရမှာ အားနာလို့ ရေငုံနေပြီဆို ( အဖွား ) အမေကြီးက ...
" ဟေ့... နင်တို့အဖိုးတော့ ခေါင်မိုးပေါ် တက်သွားပြီဟေ့...။ ငါပဲ တူတွေ လွှတွေ သွားငှားရတော့မှာပါပဲကွယ်..." လို့ ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံး ပြောလေ့ရှိတယ်။
မရွှေစုတို့ မေမေလည်း တစ်ခုခု ပြောစရာရှိလာလို့ ဖေဖေက ဘာမှ မပြောပဲ ငြိမ်နေပြီဆို ..
"အင်း... နင့်အဖေ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ငါ့ကို စောင့်နေတယ်ဟေ့..." လို့ ငေါ့ပြောတော့တာပါပဲ။
ဟား... ဦးရေချမ်းလား... ဘာပြောကောင်းမလဲ။
ကျနော်... ခေါင်မိုးပေါ်မှာ အမြဲ နေ နေပါသည်တဲ့။
ခေတ်မီသွားအောင်ပြောလိုက်ဦးမယ်... See you at roof ဆိုလားပဲ…။
( တူတို့ ဆောက်တို့ လွှတို့ ပြေးလွှားငှားပေးရသူ )
ခေါင်မိုးပေါ်က လူကြီး မွေးနေ့ အမှတ်တရ…။
၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
Posted by စုချစ် at 10/16/2014 03:09:00 PM9comments:
Labels: Birthday, ကိုရေချမ်း နဲ့ မရွှေစု
Posted by စုချစ် at 10/13/2014 03:38:00 PM4comments: